Antaninarenina: fanafihana tsy tafita…
Posted on 22/03/2010 by gazetyavylavitra
Andro antoandro be nanahary. Tsy nisy nanampo na inona na inona. Tampotampoka teo, nirefotra ny basy. Roa no nitsirara tamin’ny tany. Iray azo sambo-belona ary nisy ny tafaporitsaka.
Raha ny filazan’ny GIR nanao ny opération teny an-toerana dia izany Lova kely izany ny iray tamin’ireo lavo. Ary mbola fantarina kosa ny amin’ilay miakanjo mena.
Voalazan’ireo teny an-toerana nanatri-maso ny fiandohan’ny tantara fa namaly sy ‘ni-birda’ ilay miakanjo mena ary niafara tamin’ny tifitra avy amin’ny polisy izany (version N°1 io). Rehefa nojerena ny tao anaty sakaosy dia nahitàna PM sy chargeur feno hipoka ary puce telephone portable iray. Ankoatra an’io dia nisy karazana karatra ihany koa izay tsy hay na karatra momba ny inona na momba ny inona. Feo teny an-toerana ihany koa no nilaza fa raha tena nampiasa ilay basy teny aminy ireto olona ireto (raha nanana fotoana) dia maro no tavela teo Antaninarenina satria mety hanao tifitra variraraka avy amin’ny PM teny aminy ry zareo. Ary dia ‘hihinana’ avokoa hatramin’ny mpandalo sy ireo mpivarotra amoron-dalana.
Voa teo amin’ny masony ilay miakanjo mena, raha teo amin’ny lohaliny sy ny tratrany kosa ilay ‘Lova kely’.
Rehefa nanontaniana moa ireo polisy roa azo nanontaniana teo an-toerana (isan’ny nandray anjara tamin’ny fanakanana ity fanafihana mitam-piadiana ity), dia samy nanana ny filazany. Ny iray nilaza fa ny ‘Rishi-or’ no saiky hotafihana, ary ny iray hafa nilaza fa ny ‘B.O.A’ no saiky hapoakan’ireto andian-olona ireto (version N°2 io).
Tsy mbola voafaritra mazava araka izany izay tena tanjona farany saika halehan’ireto andian’olona nitam-piadiana ireto. Fa ny hita dia teo anoloan’ny Rishi-Or izy roalahy no tapitr’aina. Andrasana araka izany ny filazana ofisialy avy amin’ireo mpitandro filaminana.
Ny tena nahazendana ny rehetra dia ny fahasahian’ireto olona ireto nirotsaka hanao operation eny Antaninarenina, izay tsy lavitra ny toerana misy ny FIS ary feno mpitandro filaminana miaro ny lapa. Fanehoan-kery ve no saika hatao sa zavatra hafa mihitsy? Itony angamba no tonga amin’ny lazaina hoe ‘Mangarom-biby an-davaka’.
Fa ny version N°3 izay azo rehefa nilamina tsara ny tanàna dia ity: Efa hatrany Antsahamanitra tany no mety ho nanarahan’ny GIR azy roalahy ireto, nisy ny nihainohaino teny an-jaridainan’Antaninarenina ka rehefa nahita fa efa fantampatatry ny polisy ny operation kasaina hatao dia niala ny zaridaina ary nifanenjehana, fa rehefa teo anoloan’ny Rishi-Or Antaninarenina vao voasakana. Nasaina nandohalika hoy ilay nitantara ka nosavain’ny iray tamin’ireo polisy taty amin’ny sisin-dalana ny sakaosy. Ny polisy iray kosa nanambana basy avy ary amin’ny arabe. Rehefa nilaza ilay nisava fa basy no tao anatin’ilay sakaosy dia nifandimbiasan’ireto polisy roalahy ireto ny fitifirana azy roalahy, izay marihin’ilay mpitantara fa efa nasaina nandohalika teo amin’ny arabe, teo anelanelan’ireo fiara nijanona teo. Raha ity version N°3 ity izany no jerena dia tsy nisy mihitsy ny resaka fifampitolomana voalazan’ny version N°1.
Mbola samy miandry izay hambaran’ny polisy amin’ny alalan’ny TV sy ny Radio indray e!
Ny nampalahelo tamin’ity raharaha ity dia tsy nisy fanadiovana ny sisin-dalana feno rà fa niandrasana ny oram-be io tolakandro io izany mba hiverenan’ny fahadiovana. Na teo aza anefa ny oram-be dia tsy nisy nitsimpona kosa ireo taim-bala nitifirana azy roalahy fa mbola teo an-toerana foana. Nefa raha ny firesaky ny polisy hatr’izay dia tsy maintsy vidian’ny fianakaviana ny isan’ny bala lany vao azo ny razana. Inona ar no marina amin’io?
Misy mantsy mametraka ahiahy ny amin’ny antony namonoana azy roalahy ireto raha ny mpitazana teny an-toerana.
Vaovao farany: Araka ny voalaza tamin’ny TV Plus io hariva io dia naman’i Dorrick ireto jiolahy voatifitra teny Antaninareinina ireto. Basy PM MAc 49, sy bala roa no teny amin’izy ireo. (nefa raha ny hitan’ny masoko aloha dia toa fenofeno ihany ilay izy)
Filed under: anao ny fitenenana, fandriampahalemana, fiaraha-monina, halatra, tapatapany | Tagged: Antaninarenina, fanafihana, FIS, GIR |	1 Comment »